दिमागलाई तेज बनाउने गतिविधि | The Republic Indian
Home साप्ताहिक विशेष दिमागलाई तेज बनाउने गतिविधि
४ अगस्त २०२१: दिमागको क्षमता बढाउनका लागि दिमागलाई हरेक क्षण बिजनेश दिइरहनु पर्दछ। मानसिक गतिविधिहरुले दिमागको क्षमता बढाउँदछ। यसले सुन्ने क्षमता र डिप्रेशनबाट बचाउँछ।
हवार्ड मेडिकल स्कूलका न्यूरोलोजिष्ट डा. क्याथरिन प्यापका अनुसार न्यूरोजेनेसिस प्रक्रियाबाट दिमागमा नयाँ कोष बन्छ। जब तपाईंले मानसिक क्षमताहरुलाई चुनौती दिन थाल्नुहुन्छ तब दिमागका कोषहरुका बीचमा नयाँ सम्पर्क हुन्छ। यस्तो हुँदा दिमाग धेरै नै सक्रिय हुन्छ र तीब्र काम गर्न थाल्छ।
न्यूरोबायोलोजिष्ट लरेन्स कट्जका अनुसार दुवै हातका निरन्तर प्रयोगले रचनात्मक र तार्किक क्षमतामा सुधार हुन्छ। यसका लागि उल्टो हातले ब्रस गर्ने, कपाल कोर्ने र लेख्नका लागि दुवै हातको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस कार्यले पनि दिमागको सक्रिय- ता बढाउँछ र दिमाग तेज हुन्छ। कुनै पनि अर्को भाषामा पारङ्ग- त हुन वर्षौं लाग्छ। दिमागका बेग्लाबेग्लै भागहरुको सक्रियता बिना अन्य भाषा सिक्न सम्भव छैन। यसकारण भाषाहरुको दखलले पनि मानिसको मस्तिष्कलाई सक्रिय बनाउन मद्दत मिल्छ।
कागजलाई मोरेर त्यसबाट विभिन्न कताकृतिहरु बनाउने जापा- नको यो पद्दति वर्षौं पुरानो हो। यसलाई ओरिगेमी भनिन्छ। यस कार्यले पनि दिमागमा सकारात्मक असर पर्दछ। यसमा गणित, विज्ञान जस्ता विषयहरुका शैलीहरु समावेश भएका हुन्छन्। यसबाट पनि दिमागको सक्रियता बढ्छ। कतिपय अध्ययनहरु बाट दैनिकको शारीरिक अभ्यासले पनि दिमागलाई तेज र स- क्रिय बनाउन मद्दत मिल्छ। शारीरिक अभ्यासका कारण दिमा- गमा अक्सिजनको सञ्चार तीब्र हुन्छ जसले गर्दा दिमागमा स- कारात्मक असर पुग्दछ।
Previous articleएडटेक कम्पनी ‘बायजू’ को मालिक रवीन्द्रनको विरुद्ध मामिला दर्ता
Next articleआइफोनको ब्याट्री दह्रो राख्ने उपयोगी टिप्स
रक्षाबन्धन र जनैपूर्णिमा पर्वको महत्व
Reporter - August 22, 2021 0
काठमाण्डौl प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा (ऋषि तर्पणी) पर्व आइतबार देशभर नव यज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर...
हलिउडका चर्चित चलचित्रले पनि लुकाउन नसकेका ब्लूपर्स (गल्तीहरु)
१७ अगस्त २०२१: भनिन्छ दर्शकलाई अर्को संसार पुर्याउन सक्ने शक्ति चलचित्रमा हुन्छ। यद्यपि, चलचित्र मानिसहरुले बनाउने भएर त्यसमा अपूर्णता हुन्छन्। त्यसैले यसमा...
कला: लोकगीतहरूलाई बचाएर राख्नुपर्नेछ…लोक कलाकार नरेन्द्र गुरूङ
Reporter - August 13, 2021 0
- कालूसिंह रनपहेंली(मो. ९४३४४१०६४६) ढाका टोपी क्या राम्रो शिरै झल्क्यो झलक्कैइन्द्रेणीको रङ्जस्तै ढल्के जोवन ढल्कँदैज्यानमायालाई एनी रेशम चट्टै नारान...